Easy Japanese in Burmese - Lesson 17 | NHK WORLD RADIO JAPAN
NHK WORLD > လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ > မြန်မာဘာသာ Top > သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်များ > သင်ခန်းစာ 17
စာအုပ်ဆိုင်ထဲမှာ အန်းနာက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပုံရတဲ့ မန်းဂါ့စာအုပ် တွေကို ရှာတွေ့သွားခဲ့ပေမယ့် သူဘာကိုဝယ်ရမယ် ဆိုတာ မဆုံးဖြတ်နိုင် ဖြစ်နေပါတယ်။
သင်ခန်းစာ 17 ၁ဝ မိနစ်
အသံမထွက်ဘူးဆိုရင် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။ (click လုပ်ပါ။)
သင်ခန်းစာကို download လုပ်ယူရန် 17
OSUSUME WA NAN DESU KA
あ、この本いいなあ。あれも面白そう。 အာ... ဒီစာအုပ် ကောင်းလိုက်တာ။ ဟိုဟာ လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်း မယ့်ပုံပဲ။
A, KONO HON II NÂ. ARE MO OMOSHIROSÔ.
အာ... ဒီစာအုပ် ကောင်းလိုက်တာ။ ဟိုဟာ လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်း မယ့်ပုံပဲ။
さくらさんのおすすめは何ですか。 ဆာ့ခူရာစံက ကောင်းတယ်လို့ ညွှန်းချင်တာ ကဘာပါလဲ။
SAKURA-SAN NO OSUSUME WA NAN DESU KA.
ဆာ့ခူရာစံက ကောင်းတယ်လို့ ညွှန်းချင်တာ ကဘာပါလဲ။
これはどう？ ဒါ ဘယ်လိုသဘောရလဲ။
KORE WA DÔ?
ホラーはちょっと…。 ကြောက်စရာကာတွန်း တွေကတော့... အင်း...။
HORÂ WA CHOTTO....
ကြောက်စရာကာတွန်း တွေကတော့... အင်း...။
ဒီစကားလုံးကို တိုက်ရိုက်နည်းနဲ့ မဟုတ်ဘဲ သွယ်ဝိုက်ပြီး ငြင်ငြင်သာသာငြင်းပယ်တဲ့အခါ သုံးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ HORÂ WA CHOTTO...
(ကြောက်စရာကောင်းတာတွေကတော့.... နည်းနည်း.... အင်း..)
နာမဝိသေသန + SÔ
OMOSHIROSÔ ဆိုတာကကြည့်ရတာ စိတ်ဝင်စားဘို့ ကောင်းမယ့်ပုံဘဲ လို့ ပြောတာပါ။ နာမဝိသေသန နောက်ကနေ SÔ ကိုထည့်လိုက်ရင် တစ်ခုခုကို ကြည့်ပြီး ခန့်မှန်း ဆုံးဖြတ်တဲ့ အခါသုံးတဲ့ စကားလုံးပါ။ တစ်ခုခုကို နားထောင်ပြီးတော့ ဒါမှမဟုတ် ကြည့်ပြီးတော့ ကိုယ့်အမြင်ကို ပြောတဲ့နေရာမှာလည်းသုံးပါတယ်။
တိတ်ဆိတ်ခြင်း၊ စနစ်တကျ အစီအရီ
ဂျပန်စာဟာ အိုနိုမာတိုပဲ စကားလုံးတွေအများကြီးရှိတဲ့ ဘာသာစကားပါ။ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ အော်သံတွေကနေ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေအထိအိုနိုမာတိုပဲစကားလုံးတွေနဲ့ အသံထွက်လို့ရပါတယ်။ ဒါကိုအသံဖိုင်လ်နဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ်။
စာအုပ်ဆိုင်ကြီးထဲမှာ လာဝယ်တဲဝယ်သူတွေအတွက် ကွန်ပျူတာထဲက နေစာအုပ်ရှာလို့ရတဲ့စနစ်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အဲဒီစနစ်ကိုသုံးပြီး ရှာချင်တဲ့စာအုပ်က ဆိုင်မှာရှိလား ရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာ ကိုကြည့်လို့ရတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။
သင်ခန်းစာ 16 လှေခါးကိုတက်ပြီးရင် ကျေးဇူးပြုပြီး ညာဘက်ကိုသွားပါ